Markab Dhuxul siday oo muddo u afduubnaa burcadbadeed oo ku gubtay Xarardheere. – Radio Daljir
Markab Dhuxul siday oo muddo u afduubnaa burcadbadeed oo ku gubtay Xarardheere.
Xarardheere, June 16- Markab ku gooshayey calanka waddanka Baarma ayaa shalay goor gaaban dab ku qabsaday xeebta degmada Xarardheere ee gobolka Mudug, kaasoo lagu guul darraystay damintiisa kaddibna basbeelay.
Shaqaalihii saarnaa markabkaasi ayaa si hal-haleel ah looga daad-gureeyey markabka kuwaasi oo la sheegay dhammaantood in ay ka bad-baadeen halistii iyo holacii ka dhashay dabkii qabsaday marka.
Markabkaan oo siday dhuxul uu ka soo qaaday magaalada Muqdisho ayaa in muddo ah xeebta degmada Xarardheere waxaa ku haystay koox burcad-badeed ah oo afduubatay kana doonaysay madax-furasho lacageed oo ay qaataan.
Shaqaalihii saarnaa markabkaasi gudbtay ayaa la tilmaamayaa in ay hadda ku sugan yihiin magaalada Xarardheere, halka burcaddii haysatay markabka iyo shaqaalahana iyana isla magaaada ay joogaan.